चीन मा सबै भन्दा राम्रो ट्यूब बरफ मशीनहरु
यसमा कुनै श is्का छैन कि ट्यूब आइस मेसिन टेक्नोलोजी Vogt USA बाट उत्पन्न भयो, र यसले उत्तम ट्यूब आइस मेशिनहरू बनाउँछ। लामो समयको लागि, Vogt यसको शीर्ष प्रविधिको लागि मार्केटमा हावी छ। त्यो टेक्नोलोजीको कुञ्जी प्रणालीमा तरल आपूर्ति नियन्त्रणको बारेमा हो। डिसस पछि ...
बरफ मेसिनको नियमित रखरखाव
बरफ मेसिनको दैनिक रखरखावमा के कुरामा ध्यान दिइनु पर्दछ, र निम्न पाँच पक्षहरू ध्यानपूर्वक प्रयोगको क्रममा गर्नुपर्दछ: १. यदि पानीमा धेरै अशुद्धताहरू छन् वा पानीको गुणस्तर कडा छ भने, यसले मापन छोड्नेछ। लामो समयको लागि वाष्पीकरण बरफ बनाउने ट्रे, र टी ...
आइस मेशीन II को कार्य सिद्धान्त II
Ⅱ। संरचना वर्गीकरण विभिन्न पानी आपूर्ति मोडका अनुसार यसलाई तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ: स्प्रे प्रकार, विसर्जन प्रकार र पानी बग्ने प्रकार। स्प्रे मेशीनको संरचना चित्र 3. मा देखाइएको छ। पानी पम्पले माथि बाष्पीकरणकर्तामा पानी छर्कन्छ, र बाष्पीकरण गर्ने बरफ ट्रे ...
बरफ मेसिन १ को कार्य सिद्धान्त १
आइस मेशिनको कार्य सिद्धान्त के हो? यो अनुमान गरिएको छ कि सबै यस समस्याबाट अपरिचित छन्। यस लेखले योजनाबद्ध रेखाचित्रका साथ कार्य गर्ने सिद्धान्त र आइस मशिनको कार्यप्रवाहको बारेमा वर्णन गर्दछ। बरफ निर्माता एक प्रकारको रेफ्रिजरेसन मेकानिकल उपकरण हो जुन पानी चिसो गर्दछ ...